खाडी मुलुक साउदी अरेविया र नेपाली कामदारहरु (चिज कुमार श्रेष्ठ) - [2008-02-28]
हामी नेपाल भन्दा निकै टाढा छौं अनि हाम्रो समाज, आफन्त र परिवारलाई चटक्क छाडेर यो विरानो मुलूकमा रोजीरोटीको लागि भौतारिरहेका छौं । हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने यो जमात न त तपार्इर्र्र म मा मात्र सीमित छ, यो त उर्लेको भेल जस्तो गड्गडाएर विदेसिने क्रम अनवरत क्रममा थपिदै गएको छ । त्यसमाथि पनि गरिवीले च्यापेर होला वेरोजगारीले विवश तुल्याएर होला, ठूला राष्ट्रभन्दा पनि जान सजिलो र अन्य देशहरुको तुलनामा सस्तो आर्थिक जोह जुटाएर रोजगारीको लागि सहजै पुग्न सकिने गन्तव्य भने खाडी मुलुक भएको छ । जति सजिलै यहाँ भित्रिइन्छ त्यति नै गाह्रो छ यहाँको वातावरणमा आफूलाई समायोजन गर्न ।
आगोको लप्कामा होमिरहेका यिनै नेपालीहरुको दीनचर्या, यहाँको वातावरणलाई सत्यतथ्य समाचार, सुझाव र सूचना प्रदान गर्ने मुख्य श्रोत भनेको त यहाँका नेपालीहरु नै हुन् जो नेपाल छुटीमा फर्केर यहाँको वातावरण अवगत गराउँन सक्दछन तर छुटी लिएर नेपाल र्फकने हरकोहीले तीनसालको अवधिमा पाएको छोटो विश्रामको अवस्थामा दुःखका सागरहरु आफन्त र परिवारलाई सुनाउँन मनासिव नठान्लान । अर्को एउटा बाटो भनेको यहाँबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा वेभ साइट हो । तीनवर्षो सुखा जीवन विताएर नेपाल पुग्दा धेरै परिवर्तनहरु आइसकेको हुन्छ । साना साना नानीहरु ठूला भइसक्दछन् । गाउँघर र हावापानी नै परिवर्तन भइसकेर अर्कै मुलुृक छिरे जस्तो पनि नलाग्ने होइन । नेपाल पुग्दा अलिकति हामीमा पनि परिवर्तनहरु आउँने गर्दछ नै । तीन साल खाडी मुलुक बस्दा हाम्रो शारीरिक तथा मानसिक तवरमा परिवर्तनहरु हृुनु स्वभाविक नै हो र आर्थिक अवस्था पनि केही न केही मात्रामा सुधार त हुन्छ नै । त्यसैले होला एयरपोर्टमा ओर्लने वित्तिकै डोरी लाउरेको उपाधी पनि पाउँने गर्दछन्, यिनीहरुले । गाउँ पुगेपछि सवैको नजर उनैमा हुन्छ, विदेशको रमझमका कुरा सुन्न चाहनेहरुको भीडले घरआँगन दशैंको माहौल झैंं लाग्ने गर्दछ अझ परदेशबाट लगेका सस्ता नै किन नहुन त्यस्ता सामानहरुले निकै ठूलो महत्व पाउँने गर्दछ ।
यिनै देखासिकीले गाउँघरमा वेरोजगार भएर वसेका नवयुवामा जोस जाँगर भरिएर म पनि विदेश जान्छु भीसा मिलाइ देउ न भन्नेहरुको ठूलै जमात बन्ने गर्दछ । उमेर ढल्की सकेकाहरुले पनि नयाँ जोसका साथ परदेसिने कल्पना गर्न थाल्दछन् । कल्पनामा साहुको ऋण तिरेर गैरी खेत छुटाएको सपना देख्न पुग्छ, छोरालाई राम्रो वोडिङ स्कूलमा पढाउँने सोच्न पुग्छ । ठूली भएकी छोरीको राम्रोसँग कन्यादान गर्ने मनसायले जस्तोसुकै काम भने पनि गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछ मनमनै र भासिन पुग्छ दलदलभित्र ।
खाडी मुलुक के हो ? यहाँको परिवेश कस्तो छ ? के काम गर्नुपर्ने हो ? कस्तो योग्यताको खाँचो पर्दछ ? खान, वस्न कम्पनी तथा कपिल ?मालिक) ले दिन्छ या दिन्न ? कति पैसा कमाइन्छ ? कति वचाउँन सकिन्छ ? आदि विषय र प्रश्नहरु गौण राखेर परदेसिने गर्दछन् । म्यानपावर तथा एजेण्टहरुले पनि वास्तविकता के हो भनेर भन्नु भन्दा पनि फुरुक्क पारेर पैसा झार्ने प्रवृति देखाउँछन् । एकै सालमा करोडपति बन्ने सपना देखाइदिन्छन् । हुन त ती एजेन्डलाई पनि के दोष, खाडी मुलुकमा कस्तो अवस्था छ भन्ने बारे ती एजेण्ड र म्यानपावर खोली वस्ने पनि अनविज्ञ हुन्छन् भने कतिपयले यहाँको अवस्था थाहा पाएर पनि लुकाउँदछन् । वरु थाहा पाएर लुकाउँनु भन्दा पनि यहाँको अवस्था वारे जानकारी दिएर, ग्याँस र तेलका कुवाहरुमा कसरी काम गर्ने, कस्तो सावधानीहरु अपनाउँने, गर्मी निकै हुने हुँदा कस्तो कपडा लगाउँने, कसरी रोड दुर्घटनाबाट वच्ने आदि विषयमा टेनिङ दिएर पठाउँने व्यवस्था गर्न सके यहाँ आउने नेपालीहरुलाई केही राहत हुने थियो नै ।
विदेशको भूमिमा टेकेपछि वल्ल होस खुल्छ वास्तवमा विदेश सपना र कल्पनामा देखिएको जस्तो अग्ला आलिसान शहर नभएर अभाव र मरुभूमिय धरातलमा आफूलाई पाउँदा एकछिन त सवै विरक्तिन्छन् नै तर पनि विवशता आफूसँग त छ नै । बरु यहाँ आएर पाउने दुःख वारे पहिले नै नेपालमा नै थाहा पाउँन सके यहाँको वातावरणमा घुल्ने अभ्यासहरु त तिनले गर्दथे होला नि । गर्मीमा यहाँको तापक्रम ५० डिगीभन्दा माथि पुग्ने गर्दछ, जाडोमा कठांग्रिने जाडोको प्रलय सहनु पर्दछ । तेल र ग्याँसका कुवामा काम गर्नु निकै खतरा हुन्छ नै । समाचारहरुमा सुनिएकै कुरा हो निकै मानिसहरु यहाँ ग्याँस र तेलका कुवामा सावधानी अपनाउँन नसकेर ज्यान फाल्दछन् भने ट्राफिक नियम थाहा नपाएर दुर्घटनामा पर्नेहरुको संख्या पनि वृहद छ ।
यस्तो परिवेश हुदाँहुँदै पनि खाडी मुलुक भित्रन इच्छा गर्नेहरुको संख्या निकै छ सायद सूचनाहरु नपाएर होलान् या विवशता र वाध्यतासँसगै परिवार र घरको भित्तो टाल्न नसकेर होला । तर जव यहाँको वातावरणमा मान्छे खुट्टा टेक्न पुग्दछ । यी यावत समस्याहरुको निराकरणको उपाय भनेको एउटै छ त्यो हो, उचित शिक्षा, यहाँको वातावरण बारे सूचना, स्पष्ट जानकारी, सावधानका उपायहरु, कम्तिमा सामान्य यहाँको भाषाको ज्ञान । यहाँ आएर गर्नुपर्ने काम बारे जानकारी संगसंगै अभ्यास र टेनिङ तथा अनुभवहरु वटुल्न जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले यहाँ भित्रने कामदारहरुको लागि विशेष टेनिङ सुविधा अनि रोजगारदाता कम्पनी तथा राष्ट्रसँग कामदारहरुको काम तथा ज्यानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । साथसाथै रोजगारदाता कम्पनीसंग नेपाली कामदारको वेतन वारे स्पष्ट संझौता हुनर्ुपर्दछ । खाडी मुलुकमा काम गर्न भने जस्तो सजिलो नहुने हुँदा सरकारले यस्ता देशमा काम गर्न जानेहरुको लागि विशेष छुट जस्तै प्रिm भिसा र प्लेन टिकट निशुल्क गर्न रोजदारदाता कम्पनीसँग संझौताका प्याकेजहरु सरकारले वनाउँनु पर्दछ । यहाँ आइसकेपछि निकै कम्पनीमा नेपालीहरुले वारम्बार धोका खाइरहेका छन् । यहाँका कम्पनी मालिकहरुले भनेको कामभन्दा अर्कै काम लगाउँने । नेपालमा भनिइएको करार भन्दा यहाँ पृथक पाइने आदि समस्याहरु निकै सुन्न पाइन्छ । हुन त कतिपय नेपालीहरुले भने सरहको काम र दाम पाउँदा पाउँदै पनि धेरै कमाइने लोभमा कम्पनी छोडेर भाग्ने गर्दछन् । यस्ता समस्याहरुको निराकरणका लागि राजदूतावासको पहलले निकै नै माने राख्दछ । तर सानो त्यसमा पनि पावरलेस राजदुतावासले साउदी अरेवियाको सम्बन्धमा गौण भूमिका मात्र खेलेको हो कि भन्ने सोच यहाँका नेपालीहृरुले राख्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपाली राजदुतावास रियादले आफनो हैसियत, सिमा र अधिकारले भ्याएसम्मको सहयोग गरिरहेको दावी यहाँका राजदुतावास परिवारले गर्दछन् । साउदी अरेवियाका लागि नव नियुक्त राजदुत हमिद अन्सारीले प्रजातन्त्र दिवशको दिन पारेर साउदी अरेवियाका नेपालीहरको सम्रस्या समाधान गर्न यथाशक्य प्रयास गर्ने आकांक्षा राख्नुभयो । उहाँलाई साउदी अरवमा स्वागत छ उहाँले राख्नु भएको इच्छा पूरा होस भन्ने कामना हामी पनि गर्दछौं ।
गैर कानुनीरुपमा भित्रिएका नेपाली महिला घरायसी कामदारको समस्या यहाँ विकराल छ । कति महिलाहरु भागेर दाजदुतावासको शरण पुग्ने गर्दछन, तिनीहरुलाई राजदुतावासले आफनो प्रकृया पुर्‍याएर मात्र पठाउँने गर्दछ भनेर राजदुतावासबाट आएका समाचारहरुले स्पष्ट पार्दछ तर यसको लागि यो देशको नीतिनियम अनुरुप पनि जानु पर्ने भएर होला अलि समय लाग्नु स्वभाविक नै मानिने गर्दछ ।
खाडी मुलुकहरुमा सवैभन्दा वढी नेपालीहरु यहाँ छन् तर्सथ यहाँ काम गर्ने नेपालीहरुको लागि नेपाल सरकारले साउदी सरकारसँग श्रम संझौता गरी न्यून्तम ज्याला निर्धारण तथा सुरक्षाको ग्यारेण्टीका लागि पहल गर्नु नितान्त आवश्यक छ । अहिले यहाँ तल्लो दर्जामा काम गर्ने वंगलादेशीहरुको भिसामा साउदी सरकारले रोक लगाएको छ किनकी वंगलादेशीहरु वढी मात्रामा चोरीमा संलग्न रहि आएको दावी गर्दछन् । तर्सथ वंगलादेशीको तुलनामा नेपालीहरु सरल, सोझा अनि इमान्दार हुने हुँदा नेपालीहरुको भविष्य यहाँ राम्रो हुन सक्नेछ यदि नेपाल सरकारले समयमै साउदी सरकारसँग नेपालीहरुको समस्या तथा सुविधा बारे पहल गर्न सक्यो भने ।
नेपाली महिला घरेलु कामदारको लागि फेरि साउदी अरेवियामा वाटो खुल्यो, खुल्नु पनि पर्दछ तर नेपाल सरकारले यसको वारेमा टे्रनिङ, भाषाको ज्ञान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी भने गर्न सक्नु पर्दछ ।
उनीहरु एक त यहाँको भाषा, परिवेश र अवस्था वारे जानकारी नै नपाइ भित्रिएका कारण यहाँ आएर थप समस्याहरुको चंगुलमा फस्नुपर्ने हुन्छ । काम लगाइ दिने दलाल, काममा राख्ने मालिक खराव नियतको हुदा वलात्कारका शिकार हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । यहाँ अवैधरुपमा वलात्कार तथा लोभ लालचमा पेट वोकेर विचल्ली हुने नेपाली चेलीहरुको संख्या वृहत देखिदै आएको छ । यसमा राजदुतावासको सहयोगमा नेपालमा फर्काइएका समाचारहरु सुन्न आउँदछन् भने यहाँ गैर कानुनीरुपमा स्थापना भएका संघसंसथाहरुले पनि आफूसक्दो भूमिका खेलेको कुरामा निर्विवाद छ । तर यसको सामाञ्जस्यता, एकअर्कामा सहयोगको भूमिका र पहलका बारेमा भने यहाँका संघसंस्थाहरुले ठूलो कसरत गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
-चिज कुमार श्रेष्ठ